> Resource> Flash Drive> Raw USB Drive Data Recovery: Olee naghachi Data si Raw USB Drive
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Raw USB Drive?
M nwere USB flash mbanye na m na-eji maka ogologo oge. Ụnyaahụ mgbe m dị ihe na-emeghe mbanye kọmputa m gwara m na m na-apụghị imeghe ya. Mgbe m ego onwunwe nke ya, m hụrụ m USB mbanye bụ 0 MB na Raw faịlụ usoro. Ọ e kwesịrị ịbụ abụba 32 usoro. E nwere nza nke dị mkpa faịlụ na m USB mbanye. Nwere ike onye na-enyere m ka m faịlụ azụ?
Iji nweta gị USB flash mbanye, ị nwere ike na-agbalị usoro ya. Ma ọ ga-abụ kwa ike ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji naghachi faịlụ site na Raw USB mbanye tupu ị na-ekpebi usoro ya. Dị ka ogologo oge faịlụ gị USB flash mbanye adịghị e overwritten site ọhụrụ data, i nwere ike na-agbake niile furu efu faịlụ site na gị Raw USB flash mbanye na a Raw USB flash mbanye data mgbake usoro.
A bụ m nkwanye: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac, a n'ihe ize ndụ-free na mfe na-eji usoro ihe omume na-enyere gị iji naghachi fọrọ nke nta niile dị iche iche nke faịlụ site na gị Raw USB mbanye, gụnyere photos, ọdịyo faịlụ, videos, akwụkwọ, wdg .
Jikọọ gị Raw USB mbanye na kọmputa gị na ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery omume naghachi data si Raw USB mbanye ugbu a.
Naghachi faịlụ site Raw USB mbanye ke 3 Nzọụkwụ
Ugbu a ka na-agbalị Wondershare Data Naghachi maka Windows ịrụ ndị naghachi. Mac ọrụ ike hazie mgbake na yiri nzọụkwụ na Mac version.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode na-amalite Raw USB mbanye mgbake
Mgbe launching Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị ga-enweta a window na-egosiputa 3 mgbake ụdịdị.
Ebe a, ka họrọ "Raw File Iweghachite ọnọdụ" dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Nke a mode na-ewe gị ọtụtụ nke oge na agaghị egosi na ị na faịlụ aha na ụzọ.
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị Raw USB mbanye ka iṅomi maka furu efu faịlụ na ya
Mgbe ahụ, ị ​​dị nnọọ mkpa iji họrọ "N'ihi All Files" nhọrọ ke window na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu.
Nzọụkwụ 3 weghachite faịlụ site na Raw USB mbanye
Mgbe scanning, niile recoverable faịlụ gị Raw USB mbanye ga-egosipụta na omume window. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa na iti on "Naghachi" button naghachi na-azọpụta furu efu faịlụ na kọmputa gị.